Google On bu Google WiFi | Gam akporosis
Tupu nkeji izizi nke Wi-Fi ọhụrụ nke Google Wi-Fi bidoro ibupu ya na ndị nke mbụ na-enweghị ndidi, ụlọ ọrụ Mountain View bidoro melite maka ngwa gị «Google On» na gam akporo ọnụ na supposes mgbanwe maka a ekpemekpe ọhụrụ ugbua ugbu a ana akpo “Google Wifi” ma si otú a kwadebere iji ya na ndị ọhụụ kachasị ọhụrụ nke Google kwalitere.
Ọhụrụ nke Google On, ugbu a WiFi Google, anaghị etinye ọtụtụ mgbanwe na usoro nke arụmọrụ bụ isi, agbanyeghị, nnukwu ozi ọma bụ na ugbu a emelitere ngwa Na-enye ndị ọrụ ohere ịhazi nkeji ngwaọrụ Wi-Fi Google ha n'ụlọ niile, na mgbakwunye na ikwe ka nhazi na nchịkwa nke ngwaọrụ Google gara aga nwere ọrụ yiri ya.
Otu n’ime atụmatụ pụtara ìhè kachasị ọhụrụ nke ngwa ahụ Google WiFi bụ nke ahụ na-enye ohere iji otu n’ime atọ n’ime ngwaọrụ ndị a ahazi N’ebe nile n’ezi n’ụlọ n’ụzọ dị mfe.
Ngwa ahụ, na nsụgharị ọhụrụ ya, anatawokwa ntakịrị mgbanwe ọfụma ebe ọ bụ na ọ na-eji ụfọdụ eme ihe ugbu a Mkpa ọkụ agba agba ma nwekwaa a akara ngosi ọhụrụ maka nkwụnye. Na mgbakwunye, Google etinyewo ntakịrị nhazigharia ngwa iji mee ka ọrụ ndị bụ isi gaa na mpaghara ngosi ihuenyo ma nwee ike ịnweta ngwa ngwa site na taabụ atọ. Na Wifi kwusi nkwado, ihe na-enye ndị ọrụ ohere iwepu ohere ịntanetị nwa oge na ụzọ ahaziri iche na nke ahaziri iche maka ngwaọrụ ọ bụla ahazi.
Google WiFi na-ebugharị kemgbe Fraịde gara aga site na Playlọ Ahịa Google, ma ị nwekwara ike buru ibu ngwa na ngwaọrụ gị ma ọ bụrụ na ọ pụtaghị na ụlọ ahịa nke mba gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google On bu Google WiFi ugbu a
Ndị ọkachamara na-ekwu na Galaxy Note 7 dị oke mkpa maka batrị ahụ